I-Air Leth Self Catering Apartment - I-Airbnb
I-Air Leth Self Catering Apartment
445 okushiwo abanye
Portree, Scotland, i-United Kingdom
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Angela
U-Angela Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elinamagumbi amabili okuhamba imizuzu eyishumi ukusuka enkabeni yedolobha lasePortree kanye nechweba elinezinhlobonhlobo zezinsiza zasendaweni kusukela ezindaweni zokudlela ezisezingeni eliphezulu kuya ohambweni lokhozi lwasolwandle. Indawo enhle lapho ungahlola khona i-Isle of Skye enhle nemilingo...
Indawo yethu iyifulethi elinamagumbi amabili elinengadi encane enokubukwa okumangazayo phezu kwePortree nangaphezulu kwe-The Storr kude. Sinazo zonke izinsiza ozidingayo zokuhlala kusukela ezinsukwini ezimbalwa kuya evikini. Kukhona indawo yokupaka eyanele yamahhala futhi uhambo lwemizuzu eyisikhombisa phansi enkabeni yePortree. Ukuba maphakathi ne-Skye kwenza kube isizinda esikahle sokuhlola sonke lesi siqhingi esihle.
4.87 out of 5 stars from 445 reviews
4.87 · 445 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-445
I-Isle of Skye yavotelwa ngo-2017 njengendawo efiseleka kakhulu yokuhlala e-United Kingdom. Kukhulu kakhulu kunalokho abantu abakucabangayo futhi kuqukethe ezinye zezindawo ezimangalisayo nezinhle kakhulu emhlabeni. Ihlala yenza izindawo eziyishumi eziphezulu ongazivakashela emhlabeni jikelele. Enye yezinto ezikhangayo eziyinhloko ukuba kude futhi ngenkathi ezinye zezinto ezikhangayo ezidumile njengezinqaba nama-distilleries, zingase zibe matasa nezivakashi, ungathola njalo endaweni ethile ukuze ujabulele inkampani yakho.
Ngokuvamile sivumela izihambeli ukuthi ziqhubeke nezinto ngokwazo kodwa sihlala siseduze noma sifinyeleleka ngeselula ukuze siphendule imibuzo noma sisize nganoma iyiphi indlela. Bobabili uGeorge no-Angie basazi kahle lesi siqhingi futhi ngokuvamile banganikeza iseluleko esihle sokuthi kufanele bayephi nokuthi benzeni.
Ngokuvamile sivumela izihambeli ukuthi ziqhubeke nezinto ngokwazo kodwa sihlala siseduze noma sifinyeleleka ngeselula ukuze siphendule imibuzo noma sisize nganoma iyiphi indlela. B…
Hlola ezinye izinketho ezise- Portree namaphethelo